Kenya Oo Hargeysa u Soo Dirtay Dublamaasiyiin Indho-indheeyn ku Sameeyay Qunsuliyada Ay S/land Ka Furanayaan | Marsa News
Kenya Oo Hargeysa u Soo Dirtay Dublamaasiyiin Indho-indheeyn ku Sameeyay Qunsuliyada Ay S/land Ka Furanayaan
September 23, 2019 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Dawladda Kenya ayaa toddobaadkii hore waxay magaalada Hargeysa u soo dirtay wefti Kenyan ah oo diblomaasiyiin ah.
Ma jiro wax war ah oo ay Kenya iyo Somaliland ka soo saareen weftigan, laakiin wararku waxay xaqiijinayaan in ujeedada socdaalka diblomaasiyiintaasi ahaa sidii ay Kenya qunsuliyad uga furan lahayd magaalada Hargeysa, iyagoo indho-indheeyay meesha ku haboon ee ay ka dhigan karaan qunsuliyada.
Waxa dublamaasiyiintan magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland.
Kooxdan dublomaasiyiinta ah oo ka koobnaa saddex xubnood ayaa Jimcihii ka dhoofay magaalada Hargeysa.
Xukuumadda Somaliland ayaan wali ilaa hada wax war ah oo la xidhiidha waftigaa aan soo saarin, balse ilo-xogogaal ah ayaa sheegaya in xubnahaa dublaamisyiinta ah ay kulan wada qaateen madaxda wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland.